इशा दिदि तपाईको सहयोगले ‘अब म बाँच्छु’… « Postpati – News For All
जातियता र बर्गिय मुक्तीको प्रश्न
मेरो देशको झण्डाको बेइज्जती नगर
मगर संसार ग्रुपले कालुको परिवारलाई घर बनाई दिने अध्यक्ष अनिल लामिछाने मगरद्वारा जानकारी
यस्तो छ ३ दिनको मौसम पूर्वानुमान. कहाँ-कहाँ हुन्छ भारी बर्षा ?
इशा दिदि तपाईको सहयोगले ‘अब म बाँच्छु’…
असोज १४, काठमाडौं । दुवै किड्नी फेल भएका सुनिल तामांगलाइ बेलायतबाट इशा गुरुङको पहलमा रु. २ लाख ६१ हजार रकम संकलन गरी हस्तान्तरण भएको छ । नेपालबाट अनवरत रुपमा समाज सेवामा संयोजन गरिरहेकी खुसि राई र जितेन राई तथा संचारकर्मीहरुको उपस्थितिमा उक्त रकम बिहिबार पिडितलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
सुनिल तामांग सहयोग अभियान चलेको एक हप्तामा सो रकम उठेको थियो । इशा गुरुङको सहयोग रकम पाएपछि मिर्गौला पिडित तामांगले खुसि हुँदै बाँच्ने आशा व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, इशा दिदीले सहयोग गर्ने बताए पछी अब म बाँच्छु भन्ने लाग्यो ।
सुनिल तामांगले आफ्नो सहयोगका लागि साथ् दिनुहुने इशा गुरुङ र अन्य सहयोगी मनहरुलाई भगवान ठानेको बताउदै धन्यवाद दिएका छन् ।
आफ्नो माया मारी सकेको छोरा अब बाँच्ने आशा व्यक्त गर्दै आमाले आर्थिक सहयोग गर्नेहरुलाई देउता भएर आइ दिएको बताइन । ऋण धन गरेर पनि ३-४ बर्ष सम्म उपचार गर्न नसकेको छोरालाई अब उपचार गर्न सक्ने खुसि व्यक्त गरिन।
सुनिल तामांगको किड्नी फेर्नको लागि स्वयं आमाले नै दिने भएकी छन् । छोरालाई त आमाले जन्म दिईन, किड्नी पनि दिने भएकी छन् । यसकारण आमाहरु संधै महान हुन्छन ।
१४ आश्विन २०७५, आईतवार को दिन प्रकाशित
सर्वोच्चले ओलीको साथ टुटाएपछि महन्थसामु दुई विकल्प
काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्न प्रशासनको अनुमति अनिवार्य
महेश बस्नेतको प्रश्न : प्रचण्डको भविष्यवाणी मिल्नु सेटिङ हो कि सूचना चुहाइयो ?
दाङमा श्रीमानलाई रुखमा बाँधेर श्रीमती र सालीमाथि बला’त्कार
दाङमा होटलमा वास बसेका एक युवाको मृत्यु
दाङमा दिदी-बहिनी ब’लात्कार आरोपित ३ जनाबिरुद्ध ३ मुद्दा दर्ता, कसरी भयो घटना ? [नालीबेली]
तुलसीपुरको पातुखोला बाढीको उच्च जोखिममा
आज तीन प्रदेशमा भारी र एउटा प्रदेशमा धेरै भारी वर्षाको सम्भावना (सूचीसहित)